रक्सीका कारण क्यान्सरको खतरा बढी, कुन देशमा धेरै, कुनमा कम ? « Nagarik Khabar
रक्सीका कारण क्यान्सरको खतरा बढी, कुन देशमा धेरै, कुनमा कम ?
प्रकाशित मिति : 15 July, 2021 8:38 pm
एजेन्सी । रक्सीको सेवनले विभिन्न प्रकारका क्यान्सरको खतरा बढी भएको हालैको एक अनुसन्धानहरुले पुष्टी गरेको छ । संसारभर पछिल्ला वर्षहरुमा कूल क्यान्सरका घटनाहरुमा ७ लाख ४१ हजार अर्थात् ४ प्रतिशत रक्सीका कारण क्यान्सर भएको थियो । हरेक २५ जना मानिसहरुमा एक जनालाई हुने क्यान्सर रक्सीका कारण भएको ती अनुसन्धानका रिपोर्टमा जनाइएको छ । रक्सीसँग सम्बन्धित यस रिसर्चमा अधिकांश क्यान्सर कलेजो, घाँटी र स्तनमा भएको पाइएको थियो । यो दाबी अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकको एक टिमले आफ्नो रिसर्चमा गरेको हो ।
साइन्स जर्नल ल्यासेट अन्कोलोजीमा प्रकाशित रिसर्चमा रक्सी र क्यान्सरका बीचको सम्बन्धका लागि वैज्ञानिकहरुले २०० भन्दा धेरै देशहरुमा रक्सीको बिक्री र त्यहाँको मेडिकल रेकर्डहरुलाई आधार बनाएर रिपोर्ट तयार गरेका थिए । उक्त रिपोर्टका अनुसार सन् २०१० देखि रक्सीको खपत र अन्य आँकडाहरु सन् २०२० मा क्यान्सरका घटनाहरुका साथमा तुलना गरिएको थियो । त्यसपछि एक सूची तयार गरिएको थियो ।
यो सूचीमा बेलायत ३८ औं नम्बरमा रहेको छ । यहाँ क्यान्सरका १६ हजार ८ सय रोगीहरु फेला परेका र उनीहरुको क्यान्सरको कारण रक्सीको सेवन भएको पत्ता लागेको थियो । अमेरिकामा ३ प्रतिशत क्यान्सरका बिरामीहरु रक्सीका कारण भएको पाइयो । यहाँ यसप्रकारका रोगीहरुको संख्या ५२ हजार ७ सय पाइयो ।
मंगोलियामा भने सबैभन्दा धेरै क्यान्सरका बिरामीहरु रक्सीका कारण भएको पाइयो । यहाँ १० जना यस्ता रोगीहरुमा एक जना रक्सीका कारण क्यान्सर भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ । त्यसैगरी सबैभन्दा कम रक्सीका कारण क्यान्सर हुनेमा कुबेत रहेको छ । कुबेतमा रक्सी प्रतिबन्ध रहेको छ ।
त्यसैगरी रिपोर्टका अनुसार क्यान्सर पुरुषको तुलनामा महिलाहरुमा कम हुने गरेको बताइएको छ । यस अध्ययनका लागि संकलन गरिएको स्याम्पल साइजका अनुसार रक्सीका कारणबाट ७७ प्रतिशत पुरुष र २३ प्रतिशत महिलाहरु रक्सीका कारण क्यान्सरको शिकार भएका छन् । पुरुषहरुमा हरेक सातमा एक जना धेरै रक्सी खाएर भएका छन् । यस्ता मानिसहरु दिनमा कम्तीमा पनि दुई पेग पिउने गरेको बताइएको छ ।
गएरातीको पहिरोले पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध
चितवन । चितवनको घोप्टे भीरमा पहिरो जाँदा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका–४
कांग्रेस क्रियाशील विवादः मन्त्रीले कार्यकर्तालाई कुटे